नेपालको जातिय छुवाछुत र रंगभेदी भेदभावविरुद्धमा अमेरिकामा नेपालीको प्रदर्शन (भिडियोसहित) « Sansar News -->
नेपालको जातिय छुवाछुत र रंगभेदी भेदभावविरुद्धमा अमेरिकामा नेपालीको प्रदर्शन (भिडियोसहित)
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १०:१०
२५ जेठ, अमेरिका । नेपालमा पछिल्लो समय झन बढ्दै गएको जातिय छुवाछुत र अमेरिकाको रंगभेदी भेदभावको अमेरिकाबासी नेपालीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जुन ७ गते आइतबारका दिन झण्डै ४ दर्जन भन्दा बढी नेपाली अमेरीकन सामाजिक संघसंस्थाहरू तथा सामाजिक न्यायिक अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको उक्त प्रदर्शन न्याय समानता र स्वतन्त्रताको लागी रहेको बताइएको छ ।
‘हामी संसारभरीका शोषित पीडितहरूको पक्षमा, जातिय, नश्लीय, रंगभेदी, भेदभाव र असमानताको घोर भर्तसना एवं निन्दा व्यक्त गर्दछौ ।’ प्रदर्शनपछि जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त अवसरमा संचारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाका (फिप्ना) अध्यक्ष लोक चेम्जोङ, मधेसी एसोसिएशनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येन्द्र शाह, जनसम्पर्क समिति अमेरीकाका अध्यक्ष आनन्द विष्ट, प्रवासी नेपाली एकता मन्चका एकता कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण देउजा, जिपि कोइराला फाउण्डेशनका अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरे, प्रवासी नेपाली एकता मन्चका सौमेन्द्र रन्जित, जनसम्पर्क समिती अमेरीकाका महासचिव मुनिन्द्र नेम्बाङ, फिप्ना संघिय परिषदका सभामुख राजकुमार विष्ट , फिप्नाका महासचिव नरेन्द्र थापा, फिप्नाका कोषाध्यक्ष छोन्जोम लामा, शेर्पा किदुक अमेरीकाका अध्यक्ष उर्गेन शेर्पा, एनआरएन अभियन्ता विष्णु रानामगर लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ
‘अमेरिकामा अल्पमत समुदायमाथिको निर्मम र बर्बर सस्थागत दमन अनि अत्याचारको दर्दनाक बिगत र ईतिहास लामो छ । सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएको दिनदेखिनै त्यस्ता वर्गीय बिभेदहरुको बिजारोपण भएको हो । अस्वेत तथा राज्यद्वारा दबाईएका अन्य अल्पमत समुदायहरुले बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न खाले न्यायिक आन्दोलनहरु गरे तथापि त्यस्ता अभियान र आन्दोलनले संस्थागत बिभेदको समूल अन्त्य गर्न सकेन ।
अहिले त्यही ईतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ र मिनियापोलिसका अर्का एकजना अस्वेत जर्ज फ्लोईडको स्वेत प्रहरीद्वारा ८ मिनेट ४६ सेकेन्ड घुँडाले घाँटी थिचेर पासविक अनि निर्मम हत्या गरिएको छ । रंगभेद बिरोधि न्यायिक आन्दोलनको परिबेग देशैभरी फैलिएपछि अहिले फ्लोईडको हत्यारा र अन्य तीन मतियारहरुलाई न्यायको काठघरामा ल्याईएको छ । जनताको संगठित शक्ति र आन्दोलनको ताकतका कारणले मात्र यो सम्भव भएको हो ।
हामी फरक भूगोलबाट आएपनि हाम्रा सपना, बाध्यता र नियतिहरु यहाँका रैथाने अस्वेतहरुको भन्दा कुनै पनि अर्थ र परिभाषामा फरक छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई पिट्दा हामीलाई दुख्नु पर्छ । नबिर्सौं उनीहरुलाई खाने बाघले हामीलाई पनि एक दिन बाँकी राख्दैनन । त्यस अर्थमा रंगभेद बिरुद्धको यो शान्तिपूर्ण न्यायिक अभियानमा अल्पमत आप्रवासी समुदायको हैसियतमा हाम्रो पनि नैतिक साथ, समर्थन अनि ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । संस्थागत बिभेद र न्यायिक सुधारका लागि हाम्रो आवाज बुलन्द पारौ ं!
अस्वेत जीवनको माने हुन्छ ! दलित जीवनको पनि माने हुन्छ ! सम्पूर्ण अल्पमत आप्रवासीहरु रंगभेद बिरोधि न्यायिक अभियानमा एक होऔं !’